Lalaon’ny Nosy 2019 :: Niraradraraka ny mariboninahitra sy vola ary fampanantenana teny Iavoloha • AoRaha
Lalaon’ny Nosy 2019 Niraradraraka ny mariboninahitra sy vola ary fampanantenana teny Iavoloha
Nisitraka ny tambin’ireo vokatra azony tany amin’ny Lalaon’ny Nosy, teny amin’ny lapan’Iavoloha, omaly, ireo atleta niaro ny voninahitr’i Madagasikara tany Maorisy ny 19 – 28 jolay lasa teo. Noraisin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry Nirina avokoa ireo atleta dimy amby valopolo amby zato niambozona medaly tamin’iny fifaninanam-paritra andiany fahafolo iny.
Nahazo mari-boninahitra avokoa ireo rehetra nisongadina tamin’io lalao io ka « Chevalier de l’Ordre National Malagasy » no nomena an’ireo telo ambin’ny folo mianadahy niambozona medaly volamena roa noho mihoatra. Nahatratra valo amby fitopolo no notolorana « Commandeur de l’Ordre de Mérite Sportif », nitondra medaly volamena tokana, raha iraika amby enimpolo ireo nakarina ho « Officier de l’Ordre de Mérite Sportif » noho ny medaly volafotsy nentiny ho an’ny tanindrazana. Telo amby telopolo kosa ireo notolorana « Chevalier de l’Ordre de Mérite Sportif » tamin’ny niambozonan’izy ireo medaly alimo.
Ankoatra ny mari-boninahitra fankasitrahana ireo dia nomena vola, arakaraka ny lokon’ny medaly azony, ireo atleta nahazo vokatra tsara, tany Maorisy. Vola mitentina roa tapitrisa ariary no sandan’ny medaly volamena iray. “Omena vola ihany koa ireo nahazo medaly volafotsy sy alimo fa tsy adino. Toy izany ihany koa ireo mpanazatra tao ambadiky ny fahazoan’ireo atleta medaly”, hoy ny Filoha malagasy nandray an’ireo atleta.
Nampanantena zavatra maro ho an’ireo mpanao fanatanjahantena ihany koa ny tenany. Isan’ireny ny “fampitomboana ny tetibola hanampiana ireo atleta sy ny fanaovana ampahibemaso izany” sy ny “famerenana ny pasipaoro maitso ho an’ireo atleta, araka ny fangatahan’ny filohan’ny Komity olympika malagasy”. Manginy fotsiny ireo fampanantenana fotodrafitrasa maro, toy ny dobo filomanosana olympika, kianja mitafo sy lapan’ny Fanatanjahantena ary toerana fanaovana fanazarantena ho an’ny mpikatroka haiady. “Atomboka amin’ity taona ity ny Akademiam-pirenena avo lenta mba hialana amin’ireo atleta voatery mampijanona ny fianarany noho ny fanaovana fanatanjahantena”, hoy hatrany ny Filoha.
Mozika metaly etsy Antsahamanitra :: Ho rakotra akanjo miendrika efamira ny fampisehoan-dry Mage 4